eNasha.com - महंगा पोटर
ह्यारी पोटरको नाम त तपाइँले सुन्नु भएकै होला । यी पोटर युवाका कारण हिजोआज सुरक्षाकर्मीको निद्रा गायब भएको छ । तपाइँलाई यो जानकारी दिलाउँ कि ह्यारी पोटरको कथा बुनिएको उपन्यास ह्यारी पोटर एण्ड द डेथ्ली हलोज्मा ह्यारी मारिएको खबर जमानामा नै 'लिक' भएपछि यसका पाठकहरुमा 'अब के होला' भन्ने सस्पेन्स छाएको छ ।
लेखिका जे.के. रोलिङको बहुचर्चित यो उपन्यासका कतिपय पानाहरु गायब नहुन्, यसको कथा र घटनाहरु बजारमा पुग्नुअघि नै सार्वजनिक नहोऊन् भनेर यसका प्रकाशक तथा वितरकहरुले ज्यान फालेर काम गरेका छन् ।
यसभित्रका सूचनाहरु नखुस्किऊन्, ह्यारी पोटर साँच्चिकै मारिएका छन् कि ब्यूँतिएका आदि कुरा किताब बजारमा पुग्नुअघि नै अरुले चाल नपाऊन् भनेर अनेक सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ । त्यो सुरक्षा खर्च जोड्ने हो भने करिब एक करोड पाउण्ड पुग्छ । करिब एक करोड पाउण्डको नेपालीमा १ अरब ३३ करोड रुपियाँ हुन जान्छ ।
यो सुरक्षा व्यवस्थामा बेलायतका प्रख्यात सेनाले सुरक्षा गर्नेछन् । किताब प्रकाशन गर्ने प्रेसदेखि वितरकसम्म आइपुग्दा ट्रकभित्र खाँदिएका लाखौँ प्रति किताबको अवस्था बुझ्न स्याटेलाइट क्यामेराले अवलोकन गर्नेछ । कुनै खति या क्षति भएमा प्रकाशकले अरबौँ रुपियाँको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । ह्यारी पोटरको सातौँ तथा अन्तिम यो किताबका लागि विश्वभर लाखौँ व्यक्तिहरु मन थामेर बसेका छन् कि साँच्चिकै ह्यारी यस भागमा मरे कि बाँचे ।
तर यो सत्य कि त यस किताबकी लेखिका जे.के. रोलिङलाई थाहा छ कि त यो किताबका सम्पादक, जसले पूरै पढेका छन् । यी दुइ जनाबाहेक यस पुस्तकका प्रकाशक, चित्रकारसहित अन्य २० जनालाई थाहा छ ।
तपाइँलाई बताइदिऊँ, लण्डनकी लेखिकाले जब यो उपन्यास लेखिसकेकी थिइन्, यसको हस्तलिखित प्रति कुनै एयरमेल गरेर न्यूयोर्क पठाइएन । यसका लागि अमेरिकी प्रकाशकले स्कलस्टिक नामक प्रकाशकले आफ्नो निजी वकिललाई बेलायत पठाएर अमेरिकासम्म ल्याइपुर्‍याएको थियो । रोचक के छ भने, ह्यारी पोटरको सफलतासँगै हरेक पुस्तकमा लगाइएको सुरक्षा संन्यत्र अघिल्लोभन्दा महङ्गो र कडा पारिएको छ ।
बेलायतमा यो पुस्तकका वितरक तथा प्रकाशक ब्लुम्सबेरीले यो पुस्तक सार्वजनिक हुनुअघि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको थियो । यसका लागि बेलायतभर प्रख्याति कमाएका एक दर्जन बढी सुरक्षा संन्यत्रलाई परिचालन गरेको छ । जानकारहरु भन्छन्, सुरक्षा संन्यत्रले मात्र प्रति घण्टा ३० पाउण्ड प्रति घण्टा कमाउने गरेका छन् । यता कुकुरको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कुकुरले पनि २० पाउण्ड प्रति घण्टा पाउने गरेका छन् ।
यसको सुरक्षा व्यवस्था कस्तोसम्म थियो भने, जुन प्रिन्टिङ प्रेसमा यो छापिँदै थियो, त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरुलाई ह्यारी पोटरका कुनै पनि अंश चुहिएको खण्डमा तिनले तत्क्षण जागीरबाट हात धुनेछन् । यता जर्मन प्रकाशकले त प्रेसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मोबाइल लैजानसमेत प्रतिबन्ध लगाएका थिए । कामको अवधिभर उनीहरुलाई खाना त्यहीँ उपलब्ध गराइएको थियो भने कतिपय कामदारहरुलाई त मुस्किलले आँखा देखिने उज्यालोमा काम गर्न लगाइएको थियो, ताकि उनीहरुले कुनै पनि पाठ्याङ्श पढ्न नसकून् ।
गएको मंगलबारदेखि बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाइएको छ । पठाउँदा बेलायती प्रकाशक ब्लुम्सबरीले स्याटेलाइट ट्रयाकिङ प्रणालीबाट रेखदेख गरेको थियो । यो प्रणालीको मूल्य मात्र प्रति ट्रक १ हजार पाउण्ड परेको थियो । रुटबाट दायाँबायाँ नलागून् भन्ने उद्देश्यले मात्र यो प्रणाली जडान गरिएको थियो ।
आधिकारिक रुपमा यो किताब शनिबार सार्वजनिक हुनेछ ।
हलिउड उपाय मूर्ख्याइँ मुद्दा मामिला उदारता गुगल भव्यता परिस्थिति इन्टरनेट बलिउड विज्ञापन प्रविधि कीर्तिमान सुन्दरी जनावर सेलेब्रिटी फट्याइँ नग्नता उदेकलाग्दो श्रीमानश्रीमती